Dowladda Soomaaliya oo xoojisay howl-gallada ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda gobolka Bakool – Radio Daljir
Nofeembar 28, 2013 3:01 b 0
Xudur, November 28, 2013 – Deegaano ka tirsan gobolka Bakool ee koonfur galbeed Soomaaliya, waxaa laga soo sheegayaa in ay ka jirto cabsi dagaal oo ka jirta deegaanada qaar, kadib dhaqdhaaq ay sameeyeen ciidamada dowladda federaalka ah ee gobolkaas.
Ciidamada dowladda ayaa u ruqaansaday deegaano dhowr ah oo ay gacanta ku hayso Al-shabaab, kuwaas oo ku yaala aaga degmada Xudur ee xaruunta gobolka.
Maamulka gobolka Bakool ayaa shaaciyey in la xoojiyey howl-gallada ka dhanka ah kooxda Al-shabaab ee ka socda gobolkaas.
Maxamed macalin Axmed oo ah duqa degmada Xudur, waxaa uu ka dalbaday shacabka gobolka Bakool in ay ka caawiyaan ciidamada dowladda howl-gallada ka dhanka ah kooxda Al-shabaab ee dowladdu ka fulinayso gobolka.
Gobolka Bakool oo inta badan ay haysato Al-shabaab ayaa waxaa meelaha dowladda federaalka ay gacanta ?kaga hayso waxaa jooga ciidamo soocan oo ka tirsan kuwa dowladda, waxaana ka baxay gobolka ciidamo ay ku jireen kuwa Itoobiya oo horay u joogay.